Boqortooyada Sacuudiga oo dib u soo celiyey Markab xoolo ka qaaday dekeda Berbera (Sababta) – Xeernews24
Boqortooyada Sacuudiga oo dib u soo celiyey Markab xoolo ka qaaday dekeda Berbera (Sababta)
Boqortooyada Sacuudiga ayaa dekadda Magaalada Berbera ku soo celisay Markab waday xoolo Adhi u badan oo gaadhaya ilaa 20 kun oo Neef, kaasoo u rarnaa Ganacsatada wax ka dhoofsada Maamulka Somalliland.
Markabkan oo ku xidhay Dekadda Magaalada Jiddah ayaa lagu amray inuu dib u laabto ka dib mar laga waayey warqadda Caafimaadka xoolaha ee dowladda Federaalka Soomaalia bixiso.
Wasiirka Xannaanada Xoolaha Somaliland Xuseen Gaafaandhe ayaa xaqiijiyay in Sacuudigu soo celiyay Markabka u rarnaa Ganacsatada Somaliland, isagoo sheegay in shuruud looga dhigay warqadda Caafimaadka Xoolaha oo ay bixineyso Wasaaradda Xannaanada Xoolaha Dowladda Federaalka Soomaalia, wuxuuna talaabadan ay qaaday dowlada Sacuudiga ku tilmaamay wax laga xumaado.
Slået op af Hiiraan Online i Lørdag den 13. juli 2019
Sucuudiga ayaa dhawaan ku wargeliyay Somaliland in Maraakiibta Xoolaha ka qaada Dekadda Berbera looga baahan yahay Warqad caafimaad oo ay bixisay Dowladda Federaalka Soomaalia.
Hase ahaatee Somaliland ayaa arrintaas ku gacan saydhay iyadoo Ganacsatada Maamulkaas Sacuudiga u dhoofiyeen Markab 20 kun oo Neef oo Adhi ah wada, balse Sacuudiga ayaa sida muuqata ku adkeysanaya in warqadaas la helo, waxayna arintan caqabad ku noqotay ganacsatada reer Somaliland ee xoolaha u dhoofiya Sacuudiga oo macaash heli jiray xiligan oo kale ee xajku soo dhow yahay.
Markabka la soo celiyey oo lagu magacaabo MV-FAHAD iyo ayaa ku soo wajahan Dekadda Magaalada Berbera halkaasoo uu ku soo celinayo xoolihii faraha badnaa ee uu ka daabulay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/07/markab.png 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-13 19:40:592019-07-13 19:42:37Boqortooyada Sacuudiga oo dib u soo celiyey Markab xoolo ka qaaday dekeda Berbera (Sababta)
Hodan Naaleeye iyo Seygeeda oo kamid noqday dadkii lagu dilay Weerarkii Kis... Siyaasi Aadan Alaale oo ka hadlay afgambi dhicisoobay oo lala beegsaday duqa...